Iso lekati likaSillimanite. Kwesinye isikhathi kubizwa ngokuthi yi-fibrolite - Ividiyo
Iso lekati likaSillimanite
Amathegi iso Cat sika, Sillimanite, Iso lekati likaSillimanite
Iliso eliyigugu lekati likaSillimanite elisho izinzuzo nentengo.
Thenga iso lekati lemvelo le-sillimanite esitolo sethu
Iso lekati likaSillimanite kwesinye isikhathi kuthiwa yi-fibrolite ngoba amakristalu alo avela ngamaqembu, afana nemicu.
Sillimanite itholakala ngemibala ehlukahlukene okubalwa kuyo okuluhlaza okotshani, ophuzi, onsundu, oluhlaza okwesibhakabhaka, omhlophe kanye nomnyama imbala. Igugu lingatholakala njengetshe eliyigugu elisobala ngempela, noma lingabonakali kahle ngokukhazimula oku-waxy.
Ku-gemology, ukuxoxa, noma ukuxoxa noma umphumela wamehlo wekati, kungumphumela wokubonisa okubonakalayo obonwa kwamanye amatshe ayigugu, emahlathini nase-carbon fiber. Ihlanganiswe ngesiFulentshi “œil de chat”, okusho ukuthi “iso lekati”, ukuxoxa kuvela ngenxa yesakhiwo esinemicu yento, njengakwi-quartz yamehlo engwe, noma ngokufakwa ezintanjeni noma emigodini engaphakathi kwetshe, njengasesweni lekati i-chrysoberyl. Izimbangi ezibangela ukuxoxa e-chrysoberyl yi-rutile yamaminerali, eyakhiwe kakhulu nge-titanium dioxide. Amasampula ahloliwe awanikanga bufakazi bamashubhu noma imicu. I-rutile inciphisa konke ukuqondanisa ngokunqamulelayo maqondana nomphumela wamehlo ekati. Kucatshangwa ukuthi ipharamitha ye-latile yesakhiwo se-rutile ifana nezimbazo ezintathu kuphela ze-orthorhombic crystal chrysoberyl, okuholele ekuqondeni okuncanyelwayo kuleyo ndlela.
Kutholakala emhlabeni wonke, eMyanmar (eBurma), eSri Lanka (eCeylon), e-USA, eCzechoslovakia, eNdiya, e-Italy, eJalimane naseBrazil.
Inzuzo yekristalu lekati likaSillimanite nezinzuzo zezindawo zokuphulukisa
Itshe eliyigugu leso likaSillimanite liqinisa izimfanelo zobuholi kumuntu. Iso lekati likaSillimanite lisiza kakhulu ukuthi umuntu athuthukise izimfanelo zobuholi. Kuphakanyiswa ukuthi kufakwe lelitshe, uma umuntu ephethwe yinyanga. Ilinganisa isici somzwelo somuntu. Iso laleli kati lisiza oligqokile ukuthi lithathe izinqumo ezingcono kakhulu nezihlakaniphile empilweni. Kuletha ukuqonda kwalokho okulele ngemuva kwezimo empilweni yomuntu ozigqokile. Leli tshe eliyigugu liletha umzimba onengqondo nowokomzwelo ndawonye. Kuvusa ukwelashwa ngokomzwelo.
Abaphilisi bangathola leli tshe lisiza ukuvumelanisa ama-chakras futhi ungathola ukuthi ukulisebenzisa kunoma iyiphi i-chakra kuzosiza ukuletha wonke ama-chakras ekuqondeni. Kuyitshe eliwusizo lokuthi abelaphi abasebenzisa imvelo basebenzise ukubasiza ukuthola ukuthi iklayenti labo lidinga usizo ngani. Sebenzisa umuzwa wakho ukukusiza ukuthi unqume ukuthi uzowusebenzisa kuphi, ngoba uzosiza noma yimaphi ama-chakras ongakhetha ukuwasebenzisa.
Ngabe iliso lekati le-sillimanite lilungele ini?
Kuhle kulabo bantu ababhekene nezinkinga zesikhumba noma ukungezwani komzimba. Ingagqokwa futhi yilabo, abanelanga labo elingasebenzi kumashadi abo emvelo futhi kulabo abazelwe izinsuku zokuzalwa zingu-1 no-8. I-crystal isula izithiyo futhi isuse noma imiphi imiphumela emibi.
Ziyini izinzuzo zetshe eliyigugu lekati?
Itshe eliyigugu linganciphisa ukungakhululeki kwengqondo okubangelwa ukungabi nalutho kwezidingo. Kunganciphisa ukukhathazeka. Ukugqoka iso lekati kunganikeza ukucabanga okuvelele futhi kuvuselele imemori. Lezi yizo zonke izinzuzo ezibalulekile zetshe.
Ziyini izinzuzo zetshe leso lekati?
Ukugqoka itshe legugu lekati kungasiza ukubhekana nokuhlangenwe nakho okunjalo kaningi kunokungabi nakho, kuletha ukuthula nokuzwana. Kusiza umuntu ukuba azihlukanise nokunamathiselwe kwezinto ezibonakalayo, athole ukukhanyiselwa okungokomoya. Amandla kaKetu angasiza ekuqhubekeni phambili ngokomoya, ikakhulukazi uma ungumvangeli noma ofuna inkolo.
Inani letshe eliyigugu le-sillimanite lekati lemvelo kanye nentengo nge-carat ngayinye esitolo sethu:
Iso lekati likaSillimanite liyathengiswa esitolo sethu samatshe ayigugu
Siphinde futhi senze ubucwebe beso lekati elenziwe ngokwezifiso njengamasongo wokuzibandakanya, imigexo, amacici e-stud, namasongo, imihlobiso elengayo… Ngiyacela Xhumana nathi kwesilinganiso.
Ikati yeto topazi
Amathegi iso Cat sika, Topaz
Iso lekati kornerupine
Amathegi iso Cat sika, Kornerupine
I-danburite yeso lekati
Amathegi iso Cat sika, I-Danburite
Ikati iso le-aquamarine
Amathegi aquamarine, iso Cat sika